बैशाख १५ पछि केवल टिभी अनिवार्य डिजिटलमा, एनालगवाट डिजिटलमा जाँदा उपभोक्तालाई के फाइदा? :: BIZMANDU
बैशाख १५ पछि केवल टिभी अनिवार्य डिजिटलमा, एनालगवाट डिजिटलमा जाँदा उपभोक्तालाई के फाइदा?
प्रकाशित मिति: Apr 6, 2017 12:00 AM
काठमाडौं । सरकारले आगामी १५ वैशाख पछि नेपालका सबै केवल टेलिभिजन एनालग सिस्टमबाट क्रमशः डिजिटलमा जानुपर्ने नियम ल्याएपछि सेवा प्रदायले उक्त प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको नियम अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर, वीरगञ्ज, बिराटनगर, पोखरा क्षेत्रका केबल टेलिभिजनहरुलाई डिजिटलाइजेसन गर्नु पर्नेछ।
यी स्थानमा काम सकिएपछि क्रमशः देशका सबै नगरपालिकामा पनि आगामी १५ कात्तिक पछि एनालग सिस्टम विस्थापित हुने र डिजिटलाइजेसनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
अहिले बजारमा हल्ला भएजस्तो बैसाख १५ देखि सवै एनालग सिस्टमका टिभी च्यानल बन्द हुने भने होइन। त्यसपछि राजधानीबाट डिजिटलाइजेसन प्रक्रियाको थालनीमात्र हुने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका केबल समन्वय शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर अनिल भुजेलले बताए।
मन्त्रालयले भने २०७४ को अन्त्यसम्म देशभरका टेलिभिजन एनालग सिस्टमबाट डिजिटल सिस्टममा लैजाने योजना बनाएको छ। मन्त्रालयले २०७५ बैसाखबाट भने एनालग हटाएर डिजिटलमा लैजाने भनिएपनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा केही प्राविधिक र व्यवहारिक कठिनाई रहेको इन्जिनियर भुजेलले बताए।
एनागल सिस्टमबाट प्रशारण हुने टेलिभिजनको च्यानलमा गुणस्तर कम हुने हुँदा डिजिटलाइजेसनको लागि कोशेढुङ्गा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारी निर्णय र निर्देशनपछि प्राइभेट केवल अपरेटरले एनालगवाट डिजिटलमा जान सुरु प्रकृया गरिसकेको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका कार्यकारी निर्देशक विश्वेश्वर प्रसाद गौतमले बताए। उनले बजारमा १५ बैशाख पछि केबल टिभी बन्द हुने भनेर हल्ला चलाएर कुनै निश्चित कम्पनीको बजार प्रवद्धन गर्नका लागि मिडियाहरुले सहयोग गरेको दावी समेत गरे।
पुरानो प्रविधिवाट सेवा दिइरहँदा नयाँ प्रविधिमा पछि परिने, ग्राहक पहिचान गर्न मुस्किल पर्ने तथा सरकारको राजश्वमा पनि कमि आइरहेका कारण यो नियम ल्याइएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए। उनले हाल केबल अपरेटरहरूले भ्याट बिल नदिने, ग्राहक संख्या कम देखाउने र भारतीय डाइरेक्ट टु होम (डिटिएच) मार्फत् सिग्नल डाउनलोड गरी वितरण गर्ने कार्य गरेको र अब त्यो काम पूर्ण रूपमा रोकिने बताए।
ढकालले देशभरी करिव ७० लाख टिभि रहेकोमा केवल अपरेटरहरुले त्यो सङ्ख्यालाई घटाएर २० लाखको हाराहारीमा मात्र मन्त्रालयमा जानकारी दिने र राजश्व छल्ले गरेको अवश्था रहेको बताए। अब त्यस्तो अवस्था नरहने र मन्त्रालयमा नै बसेर कति ग्राहक छन् एवं ती ग्राहकले कति राजश्व तिर्छन त्यो सवै पारदर्शी हिसावले हेर्न सकिने उनले बताए।
सेटअप बक्सको मूल्यमा जथाभावी
अहिले बजारमा विभिन्न कम्पनीले एनालगबाट डिजिटल प्रविधिमा लैजानका लागि सेटअपबक्स विक्रि गरिहेका छन्। एनालगवाट डिजिटल प्रविधिमा लैजानका लागि आवश्यक पर्ने सेटअप बक्स, एन्टेनालगायत आवश्यक सामग्रीको मूल्य कम्पनीअनुसार फरक फरक रहेको छ।
डिस होमले प्याकेजमा दुई हजार ९९९ रुपैयाँमा एन्टेना र सेटअपबक्स दिइरहेको छ भने सुविसुले कम्बो प्याकेजमा इन्टरनेटसहयत पाँचहजार तथा मासिक थप ५०० रुपैयाँमा टिभी हेर्ने सुविधा समेत दिइरहेको छ।
सेवाग्राहीले भने केवल अपरेटर कम्पनीले एकै किसिमको सामाग्रीलाई फरक मूल्यमा बिक्री गरिरहेको र गुणस्तरमा पनि भेदभाव गरेको बताउने गरेका छन्।
किन आवश्यक छ एनालगबाट डिजिटलमा जान?
नेपाल दूरसञ्चार सम्वन्धि काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन (आइटियु) को सदस्य मुलुक हो । आइटियुले विश्वभर समय अवधि तोकेर इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने तथा एनालग टिभीको सट्टामा डिजिटल टिभी कार्यन्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रहरुसमक्ष यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ। सोही अनुसार नेपालले पनि एनालगवाट डिजिटल टिभीमा प्रवेश गर्न लागेको हो।
हाल देशैभर करिव ५० लाखको सङ्ख्यामा केवल टिभीका ग्राहक छन्। अधिकांश केवल कम्पनीले औषतमा मासिक ३०० रूपैयाँको औषतमा ग्राहकबाट शुल्क लिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो तथ्यांक हेर्दा एक महिनामा केबल टेलिभिजनको बजार डेढ अर्बको हुने देखिन्छ भने एक वर्षमा करिब १८ अर्बरुपैयाँको कारोवार हुन्छ।
तथ्याङ्क अनुसार सरकारले करिव ३३ करोड राजस्व पाउनेछ। अहिलेसम्म 0त्यो तथ्याङ्कको एक तिहाईभन्दा कम मात्र राजश्व प्राप्त गर्ने गरेको छ।
के हो एनालग प्रविधि?
एनालग प्रविधि टेलिभिजन प्रणालीमा प्रयोग भएको पुरानो तथा पहिलो प्रविधि हो। यसमा अडियो र भिडियोलाई एम्प्लिच्युड वा फ्रिक्वेन्सीमार्फत सिग्नल पठाउने प्रक्रिया हुन्छ।
नेपालमा यो प्रविधि टेलिभिजन स्थापना हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै चलिरहेको थियो। केहि बर्ष पहिले डिसहोमले परम्परागत प्रशारण प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेर प्रशारण सुरु गरेको थियो।
सन् १९५० को दशकमा सुरु भएको एनालग प्रविधि कम गुणस्तर भएका कारण विश्वका विकसित देशहरुबाट विस्थापित भइसकेको छ। विकासोन्मुख देशहरुमा पनि विस्थापित हुने क्रममा छ। एनालग प्रविधिमा एउटै केबलबाट धेरैजनाले टि.भि हेर्ने हुँदा गुणस्तर कम हुने गर्दछ।
डिजिटल प्रविधिमा कस्तो हुन्छ?
डिजिटल प्रविधिको अपलिङ्क र डाउनलिङ्क दुवै प्रविधि स्याटेलाइटको माध्ययमवाट प्रशारण हुन्छ। यसमा आवश्यकता अनुसार कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो सोहि अनुसार सिग्नल डाउनलिङ्क गरेर फाइवरको तारमार्फत वितरण गर्न सकिन्छ। यो प्रविधिमा सिग्नलको क्वालिटी धेरै हुने र ग्राहक पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ।
यो प्रविधिमा अडियो र भिडियोलाई डिजिटल प्रशोधन गर्ने र मल्टिप्लेक्स सिग्नल हुने हुनाले डिजिटल टिभीका दर्शकले सफा पिक्चर र गुणस्तरीय ध्वनिमा टिभी हेर्न पाउँछन्। यसमा एचडी, एचडी प्लस, सुपर एचडी, अल्ट्रा एचडी, थ्रिडीजस्ता मल्टिपल हाइ ब्यान्डविथमा टिभी हेर्न सकिन्छ।
टेलिभिजनको प्रकार तथा प्रविधि हेरेर यस प्रविधिमा अनलाइनको प्रयोगबाट टिभीमा म्यासेज आदान प्रदान, युट्यूव लगायतबाट अनलाइन च्यानल हेर्न, अनलाइन गेम्स, अनलाइन सपिङ लगायतका कार्य गर्न सकिन्छ।
यी कम्पनीले वितरण गर्छन डिजिटल सिग्नल
हाल नेपालमा एनालग तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित भएर कुल आठसय ५२ वटा कम्पनीहरुले टिभीको सिग्नल वितरण गर्दै आएका छन्। यि मध्ये कुनै कम्पनीले राष्ट्रियस्तर कुनैले क्षत्रीयस्तर र कुनैले स्थानीयस्तरमा टिभी सिग्नल वितरण गरिरहेका छन्।
यिनिहरुमध्ये डिजिटल टेरेष्ट्रियल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङका लागि चारवटा कम्पनीले काम गरिरहेका छन् भने डिजिटल प्रविधिमा आधारित केबल टेलिभिजन १० वटा कम्पनीले काम गरेका छन्।
युनिभर्सल नेटवर्क सोलुसन, महाकाली डिजिटल नेटवर्क, हनी नेटवर्क्स र वारलेस डिजिटल टिभीले डिजिटल टेरेष्ट्रियल ब्रोडकास्टिङ गर्छन भने काडमाडौं इन्टिग्रेटेड डिजिटलले डिस होम, सुबिसु केवल नेटले क्लियर टिभी, सिम्पल मिडिया नेटवर्कले सिम टिभी, स्काई केवल टिभीले स्काई केबल, कृतिदर्शन मिडियाले कृति केबल, डिजिटल अप्टिकल इन्टरटेन्मेन्ट नेटवर्कले डिओइएन केबल, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कले मेरो टिभी, केनेक्ट डिजिटलले कनेक्ट, स्मर्ट डिजिटल टिभीले स्मार्ट डिजिटल र हाम्रो टिभी नेटले हाम्रो टिभी कम्पनीको नाममा सिग्नल दिइरहेका छन्।
बैशाख १५ पछि केवल टिभी अनिवार्य डिजिटलमा, एनालगवाट डिजिटलमा जाँदा उपभोक्तालाई के फाइदा? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।